The Lunchbox (2013) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
The Lunchbox 20 Sep 2013
PG 2013 104 min Drama
IMDB: 7.8/10 41,870 votes
Nominated for 1 BAFTA Film Award. Another 29 wins & 35 nominations.
Fernandes ဆိုသူက အထီးကနျြမုဆိုးဖိုတဈယောကျဖွဈပွီး ကုမ်ပဏီတဈခုက accounting ဌာနမှာအလုပျလုပျကိုငျပါတယျ
သူကမကွာခငျ အငွိမျးစားယူတော့မှာဖွဈပွီး မိဘမဲ့တဈယောကျဖွဈတဲ့ Shaikhကို သူ့နရောကိုလှဲပွောငျးပေးဖို့ သဘောတူထားပါတယျ
တရကျမှာ သူ့ဆီကို ထမငျးခြိုငျ့တဈခုက လိပျစာမှားရောကျလာပွီး အဲ့ဒါက Ila ဆိုတဲ့အိမျရှငျမတဈဦးက သူ့ယောကျြားဆီကို
အမွနျခြောပို့နဲ့ပို့လိုကျတဲ့ ထမငျးခြိုငျ့ဖွဈနပေါတယျ Fernandes ကတော့ သူဝယျစားနကေဆြိုငျက လကျရာပိုကောငျးလာတယျလို့ပဲ
ထငျနခေဲ့ပါတယျ နောကျတရကျမှာတော့ ထမငျးခြိုငျ့ထဲမှာ စာလေးတဈစောငျနဲ့အတူ Fernandes ဆီရောကျရှိလာပါတယျ
နောကျပိုငျးမှာ Fernandes နဲ့ Ila တို့က စာတှကေတဆငျ့ အဆကျအသှယျလုပျခဲ့ကွပါတော့တယျ Ila ကသူ့ယောကျြားကို
နောကျမီးလငျးနတေယျလို့သံသယဝငျလာပွီး Fernandes နဲ့တိုငျပငျဖို့ စားသောကျဆိုငျတဈခုမှာခြိနျးလိုကျတယျ
Fernandes ဆိုသူက အထီးကျန်မုဆိုးဖိုတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ကုမ္ပဏီတစ်ခုက accounting ဌာနမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်ပါတယ်
သူကမကြာခင် အငြိမ်းစားယူတော့မှာဖြစ်ပြီး မိဘမဲ့တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Shaikhကို သူ့နေရာကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့ သဘောတူထားပါတယ်
တရက်မှာ သူ့ဆီကို ထမင်းချိုင့်တစ်ခုက လိပ်စာမှားရောက်လာပြီး အဲ့ဒါက Ila ဆိုတဲ့အိမ်ရှင်မတစ်ဦးက သူ့ယောက်ျားဆီကို
အမြန်ချောပို့နဲ့ပို့လိုက်တဲ့ ထမင်းချိုင့်ဖြစ်နေပါတယ် Fernandes ကတော့ သူဝယ်စားနေကျဆိုင်က လက်ရာပိုကောင်းလာတယ်လို့ပဲ
ထင်နေခဲ့ပါတယ် နောက်တရက်မှာတော့ ထမင်းချိုင့်ထဲမှာ စာလေးတစ်စောင်နဲ့အတူ Fernandes ဆီရောက်ရှိလာပါတယ်
နောက်ပိုင်းမှာ Fernandes နဲ့ Ila တို့က စာတွေကတဆင့် အဆက်အသွယ်လုပ်ခဲ့ကြပါတော့တယ် Ila ကသူ့ယောက်ျားကို
နောက်မီးလင်းနေတယ်လို့သံသယဝင်လာပြီး Fernandes နဲ့တိုင်ပင်ဖို့ စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာချိန်းလိုက်တယ်
Bharati Achrekar Denzil Smith Irrfan Khan Lillete Dubey Nakul Vaid Nasir Khan Nawazuddin Siddiqui Nimrat Kaur Shruti Bapna Yashvi Punneet Nagar
Aakash Sinha Aarti Rathod Ashwin Desai Avijit Khanwilkar Baaburao Sankpal Bharati Achrekar Calvin Desilva Chandrakantha Rajani Craig Narona Denzil Smith Flory Vossoaker Hubart Vossoaker Irrfan Khan Kancha Karki Krishna Bai Krishna Mandal Kyeron Kandoria Lillete Dubey Lokesh Rai Mahesh Mahadev Salavkar Nakul Vaid Narendra Arora Nasir Khan Nawazuddin Siddiqui Nimrat Kaur Quitira Vossoaker Raj Rishi More Ravindra Dubey Rosemary Hodges Rosemary Vossoaker Sadashiv Kondaji Pokarkar Santosh Kumar Chaurasiya Sebastian Vossoaker Shruti Bapna Shubh Jadav Swapnil Shirirao Vidhya Dhar Xavier Hodges Yashvi Punneet Nagar
Option 1 storage.msubmovie.com 577 MB SD (480p)
Option2megaup.net 577 MB SD (480p)
Option3uptomega.com 577 MB SD (480p)
Option4usersdrive.com 577 MB SD (480p)
Option5yuudrive.me 577 MB SD (480p)
Option6sharer.pw 577 MB SD (480p)
Option 11 usersdrive.com 1.4 GB HD (1080p)
Option 12 uptomega.com 1.4 GB HD (1080p)
Option 13 storage.msubmovie.com 2.3 GB FHD (1080p) DTS 5.1
Option 14 megaup.net 2.3 GB FHD (1080p) DTS 5.1
Option 15 yuudrive.me 2.3 GB FHD (1080p) DTS 5.1
Option 17 usersdrive.com 2.3 GB FHD (1080p) DTS 5.1
The Vanishing (2018) 2018